Enwere m ike iwuli elu backlinks dị elu n'enweghị ihe ize ndụ iji merụọ m n'ọnọdụ ọlụlụ?
Naanị weebụsaịtị na blọọgụ ndị nwere ikikere na peeji nke PageRank dị elu na ikike ngalaba bụ ebe kwesịrị ekwesị iji wuo akwaazụ azụ dị elu na. N'ezie, engines ọchụchọ na-enyocha ndị backlinks ndị a iji "ghọta" otú ụlọ ọrụ weebụ gị si bụrụ ihe a ma ama, na oke uru ọ na-enye ndị ọrụ. Ọ bụ ya mere ịnwe ngosipụta profaịlụ dị mma maka ụlọ ọrụ weebụ ma ọ bụ blog dị ezigbo mkpa, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka a gosipụta ya ebe dị anya site na nsonaazụ ọchụchọ kachasị elu na SERPs nke Google.
Ihe na-eme ka profaịlụ njikọ dị na Organic
N'otu oge ahụ, ezigbo profaịlụ na-egosi na ị ga-ewu ụlọ nkwado dị elu dịka nke ọma na nke ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụla aghụghọ, spammy, dị ala, arụ ọrụ, azụmahịa ma ọ bụ mgbanwe na njikọ bụ ndị kasị kpọọ asị Google. N'ezie, omume dị otú ahụ anaghị eme ihe kwekọrọ na Main Webmaster Guidelines, nke a na-anabatakarị maka mmepe weebụ na echiche niile nke Search Engine Optimization at scale. Ya mere, olee ihe na-eme ka usoro ụlọ ọrụ njikọ "iwu" dịka nke a na-agaghị amata dị ka mmebi? Nanị ihe ị chọrọ bụ iji wuo akwaazụ azụ dị elu na-enweghị itinye ihe maka atụmatụ ndị aghụghọ ma ọ bụ atụmatụ nchịkwa na-abụghị nke ndị isi engines ọchụchọ. Naanị mee ka ihe mebie.
Ka anyị gbadaa ruo n'ókè. Kedu ụzọ kachasị mma a ga-esi nweta ụlọ njikọ? Ekwenyere m na ihe niile ịchọrọ iji obi iru ala bụ nanị ịhapụ onwe gị pụọ "n'akụkụ ọjọọ". Agatụla maka usoro ọ bụla Grey-Hat SEO ma ọ bụ Black-Hat SEO, bụ nke a na-ezube ịghọgharị ma ọ bụ jiri aka na algorithm dị mgbagwoju anya nke Google jiri mee ihe iji chọpụta ọkwá ọkwa ọ bụla na saịtị SERPs. N'ụzọ dị otú ahụ, a gaghị enwe ohere ọ bụla iji kwenye na ị ga-etinye mkpokọta weebụ gị ma ọ bụ blog na ụgwọ Google.
Gbaa mbọ na-ejikọta ntanye na afọ ojuju
Mee ka ọdịnaya gị dị ka usoro bara uru iji wuo akwaazụ azụ dị elu n'ụzọ kachasị mma. Ma eleghị anya, nke ahụ ga-abụ ụzọ kachasị nchebe maka njikọ ụlọ njikọ na-enweghị ihe ize ndụ ọ bụla iji merụọ gị ọkwa. Cheta - ị nwere ike inweta ọtụtụ ihe karịa ọdịnaya gị mgbe niile - ihe niile ị chọrọ bụ iji jide n'aka na ọ bụ ihe pụrụ iche, dị mkpa ma na-enye ezigbo uru nye ndị na-ege gị ntị. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike ịga n'ihu na ịnweta backlinks, eduzi, ndebanye aha, mbak, na okwu. N'otu oge ahụ, ị ​​ga-eme onwe gị ka ọ bụrụ ọkachamara na-ahụ maka ọrụ ụlọ ọrụ, n'agbanyeghị na ị ga-enweta ọbụna ibu dị ukwuu na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog - site na ndị na-eleta anya gị, dị ka nke ọma dị ka ụlọ ọrụ ọchụchọ.
N'ikpeazụ, ebe a bụ ụfọdụ ihe mgbochi maka ịmalite ịmalite na egwu ahụ. N'ụzọ dị otú ahụ, ị ​​nwere ike ịmepụta akwaazụ azụ dị elu maka nzube SEO ma nwee nchebe site na mmalite:
Jide n'aka na ọdịnaya gị ọ bụghị nanị na enye ndị ziri ezi nnukwu uru, ma na-enye ya na ụfọdụ isi nke njem onye ọrụ. Oge eruola icheta ihe ndị dị mkpa nke ahịa ahịa dị iche iche, dị mma?).
Mara ihe iji mepụta ohere dị n'ịntanetị maka ebe nrụọrụ weebụ gị. Bịnye aka na ndị nwere mmasị na ịmepụta ọtụtụ profaịlụ azụmahịa bụ isi iji kesaa ihe odide kachasị mma gị na Social Media.
Tụlee ịmegharia otu akụkụ nke ihe odide edere ederede gị. Cheta, ihe niile ị ga-achọ ịmepụta ụlọ na-ejikọta njikọ - nweta ọdịnaya gị ịkwado, ịkọ, na ịnweta njikọ na. Mee ka ọ bụrụ na ị na - eme ihe ọ bụla ị ga - eme - meegharị ihe ụfọdụ na ihe dị mkpa nke ọdịnaya n'ime ihe na - adọrọ mmasị ma na - ahụ anya, dị ka nkọwa dị iche iche, akwụkwọ ntanye aka, na ụzọ ọ bụla ọzọ nke nyocha data. Nke ahụ na-arụ ọrụ maka ụlọ njikọ, na-esote ụzọ kachasị nchebe Source .